अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी पीआर लिने गरी आउने कि पढेर नेपाल फर्कने ? ख्याल गर्नुपर्ने ५ कुरा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: २५ भाद्र २०७५, सोमबार September 10, 2018
डा. हेमन्त ओझा ।
नेपाली किशोर किशोरीहरु अष्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि आउने सपना बुनिरहेका हुन्छन् । तर, ती स्वप्नद्रष्टाहरुले ख्याल गर्नुपर्ने विषय के हो भने अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीको अवस्था के छ, यहाँको सरकारको नीति कस्तो छ अनि कलेज पढ्न आउँदा ख्याल गर्नुपर्ने प्राविधिक पक्षहरु के–कस्ता छन् ?
यो छोटो लेखमा यिनै प्रश्नहरुमाथि सामान्य चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । र, यहाँ अष्ट्रेलिया आउन चाहने नेपाली विद्यार्थीले ख्याल गर्नुपर्ने पाँचवटा टिप्सहरु पनि दिइएको छ ।
नेपालीहरुको सकारात्मक छवि
मेलबर्नस्थित आरएमआईटी विश्वविद्यालयका पूर्वनायव उपकुलपतिले नेपाली विद्यार्थीहरुले अष्ट्रेलियामा राम्रो प्रतिष्ठा कमाएको बताएका छन् । उनको यो भनाइसँग धेरै अष्ट्रेलियनहरु सहमत छन् ।
नेपालीहरुमाथि अष्ट्रेलियनको विश्वास भारतीयहरु भन्दामाथि देखिएको छ । तथ्यांकहरुले के देखाउँछन् भने यहाँ नेपालीहरुको आय दर र रोजगारीको स्तर भारतीय र चिनियाँ समुदायकोभन्दा राम्रो छ । अष्ट्रेलिया सरकारले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई केही समय अघिसम्म भारतीय नागरिकभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा राखेर भिसाका निवेदनहरु केलाउँथ्यो ।
अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीहरुको आगमनको अवस्था
त्यसो त यतिबेला अष्ट्रेलियामा घर किन्ने आप्रवासी समुदायमा पनि नेपालीहरु नै अगाडि छन् ।
अष्ट्रेलियामा नेपालीहरुको छवि राम्रो भएता पनि यी सबै सफलताको अर्थ भविष्यमा यहीरुपमा मापन नहुने संकेत पनि देखिँदैछन् । नेपालीहरुको संख्या बढेसँगै समुदायभित्र नकारात्मक गतिविधिहरु पनि बढ्दै गएका छन् । यो चाहिँ नेपालीमाथिको चुनौती हो ।
यहाँ रहेका युवायुवतीहरु कुलतमा लाग्ने क्रम बढ्दो छ । पहिलाभन्दा अहिले कम उमेरका विद्यार्थीहरु कलेज पढ्न आउने क्रम भएकाले त्यस्ता कम उमेरका विद्यार्थीहरुले आफूलाई नयाँ परिवेशमा सम्हालेर लान समस्या झेलिरहेका छन् ।
एकजना नेपाली मित्र, जो २० वर्षदेखि अष्ट्रेलियामा बस्दै आएका छन् । उनी भन्छन्– नेपाली विद्यार्थीहरुमा आपसी ग्याङ्फाइट बढ्न थालेको छ । केटाकेटीको सम्बन्धलाई लिएर हुने विवाहमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नेसम्मका गतिविधि भइरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा पीआरको मापदण्ड निकै कडा बनाउँदै लगेको र नेपालीलगायत विश्वका अन्य देशबाट अष्ट्रेलिया आउने क्रम बढिरहेकाले अष्ट्रेलियामा पीआर पाउने उद्देश्य भए पनि अब आउने दिनमा पहिलाभन्दा झन् कठिन हुँदै जाने देखिन्छ ।
फेरि कतिपय विषयहरुमा पीआर पाएर पनि बेरोजगारी बढ्दै गएकाले सरकारले स्वाभाविक रुपमा त्यस्ता विषयहरुमा पीआरको मापदण्ड बढाउन थालेको देखिन्छ ।
लहैलहैमा अष्ट्रेलिया आउँदा संकट
अध्ययनका लागि अष्ट्रेलियाका बिभिन्न राज्य र शहरहरुमा रहेका नेपालीहरुको तथ्यांक
नेपालबाट आउने बेलामा अष्ट्रेलिया उड्न पाए पुग्छ, अरु सबै कुरा यहीँ आएर व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने मनस्थितिले पनि धेरै विद्यार्थीहरु अपूर्ण जानकारी र कमजोर योजनाका साथ अष्ट्रेलिया आउने गर्छन् ।
र, अष्ट्रेलिया आउनेवित्तिकै उनीहरुले धेरै कठिनाइहरु एकैपटक झेल्ने अवस्था आउने गरेको छ । सिडनी सम्झेर आउनेहरू २०० कि.मी. टाढाको उल्लङगङगमा पुग्दा रोजगारीको सम्भावनाबाट बञ्चित भई आर्थिक संकटमा परेका उदाहरण धेरै देखिएका छन् ।
राम्रो विश्वविद्यालय भनेर कम गुणस्तरका विश्वविद्यालय र कलेज पुगेका उदाहरण पनि छन् कतिपय नेपालीहरु ।
अधिकांश नेपाली विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलियामा विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र प्रोफाइलका बारेमा थाहा छैन । सिड्नीमा पढ्दैमा यहाँ भएका ८ वटा विश्वविद्यालयका एउटै हैसियत छैनन् । धेरै विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया बस्ने हुँदा कस्तो विश्वविद्यालयमा पढें भन्ने कुराले यहाँ निकै महत्व राख्छ ।
कतिपय विद्यार्थीहरु पढाइ सकेर नेपाल फर्कने उद्देश्यले अष्ट्रेलिया आएको पाइन्छ । तर, यहाँ आएपछि प्रायः सबैको अष्ट्रेलियामै बस्ने धारणा बन्दोरहेछ ।
‘म आफ्नो प्यासनका कारण जिओग्राफी पढ्न अष्ट्रेलिया आएँ । नेपाल फर्केर काम गर्न मलाई त्यो डिग्रीले काम गर्छ भन्ने लागेको थियो । तर, यहाँ आएपछि पीआर लिने र यहीँ बस्ने इच्छा भयो,’ ती नेपाली भन्छन्, ‘यहाँ पढ्दै गरेको कोर्षले पीआर नपाउने भएकाले अहिले कोर्ष परिवर्तन गरें ।’
उनको यो भनाइले विद्यार्थीहरु स्पष्ट योजना नबनाइ र चुरो कुरो थाहा नपाई अष्ट्रेलिया आउँदा समय र मेहनत खेर गएको अवस्थालाई दर्शाउँछ । काम गर्दै पैसा कमाउँदै पढ्नुपर्ने बाध्यताले नेपाली विद्यार्थीहरुमा पढाइ अनुसारको रोजगारी नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।
एक नेपाली प्रोफेसर भन्छन्, ‘नेपाली विद्यार्थीहरु काममा बढी नै लाग्ने हुँदा पढाइ–लेखाइ अति नै ‘कम्प्रोमाइज्ड’ हुने र प्रोफेसनल जागिरमा जाने प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।’
हुन पनि अधिकांश युवाहरु माझ पढाइ एउटा, काम अर्को गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यसो त अष्ट्रेलियाको न्यूनतम तलबमान संसारकै उच्च भएकाले यहाँ कमस्तरको काम गरेर पनि आफ्नो जीवननिर्वाह गर्न गाह्रो छैन । तर लामो समय दु:ख गरेर पढ्ने अनि पढाई अनुसारको काम नपाउनु यही नमज्जाको कुरो हो ।
विद्यार्थी भिसापछि टेम्पोरेरी भिसा पाउने प्रावधानले भने विद्यार्थीहरुलाई निकै सजिलो बनाएको छ ।
तर, बस्न चाहने मध्येका जोसँग पीआर हुने विषयको डिग्री छैन, उनीहरुलाई भने निकै समस्या परेको देखिन्छ । लामो समय विद्यार्थीका रुपमा काम गर्नुपर्ने र फी तिरिरहनु पर्नेको विकल्प उनीहरुसँग हुन्न ।
नेपाली विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्ने ५ टिप्स